Lesi sihloko sigxile kakhulu ezithakazelisa kakhulu, kodwa futhi wesayensi oyinkimbinkimbi. Ngazo zonke izikhathi abantu babefuna ukwazi nemvelo, ukuze ukwembula izimfihlo. Ngeshwa, umphakathi wanamuhla ukutadisha kakhulu inkinga ethile, bona ngokwabo kanye nabanye kulapho edukisayo. Yiziphi isayensi ukuthi singamethemba? Mina ngeke kubala izifundo impikiswano, ngakho njengoba ungabacasuli ochwepheshe, futhi uhlu ezithakazelisa kakhulu.
Kulesi impikiswano yesayensi Sekuyisikhathi eside saphela, njengoba konke okudingayo is Sekuvele kufakazelwe. Kepha akusikho lokho kuphela theorem. Asivumelane ngesikhathi esisodwa ukuthi wezibalo - i isayensi ngqo, futhi bazame ukubonisa ukuthi lokho 2x2 = 5 - Kuwubuwula. Kuyinto lokhu isayensi anezakhi emangalisayo. Kuyini lokhu? Lapho uyayixazulula inkinga noma equation ngezindlela ezahlukene, ekuphenduleni umphumela uyefana. I-Algebra kunengxenye ezithakazelisa kakhulu, kodwa umfundi kudinga ukuzinikela esigcwele. Ngo-geometry, zikhona izindlela eziningana ukuze nilungise noma ubufakazi.
Ngaphandle wezibalo ayikwazi ixazululwe futhi inkinga yokuthakwa kwamakhemikhali, i-physics, ezomnotho, Psychology nezinye izinhlobo zesayensi.
Ubani u-grade 7, futhi uyakhumbula ukuthi uthisha wathi esifundweni sokuqala? Kunjalo! Physics - kungcono isayensi yemvelo. Lokhu isiyalo isebenziseka ngezindlela eziningi, ihlukaniswe yaba:
quantum physics ;
wokushintsha kwamandla nokwakheka kwezinto, kanye nabanye.
Ngokwemvelo, umuntu angabona ukufunda lutho, ngoba amanzi enyakaza phezu kwamanzi, kuya sokuzamazama komhlaba okunamandla neziphepho. Okulandelayo sisenalo isayensi abanye, ukutadisha izilwane zasendle kanye technosphere.
Le nto sehlukaniswe engokwemvelo kanye inorganics. Watadisha zemvelo zamakhemikhali izinqubo, kanye wadala endaweni yokucwaninga (yokufakelwa). Siyabonga emkhakheni wesayensi yokuthakwa kwamakhemikhali avuleka hhayi kuphela izakhi ezikhona lonke eMhlabeni, kodwa futhi ukudala izinto yokufakelwa.
Kuyaphawuleka ukuthi isikole isayensi yemvelo esikhathini esizayo babhekana Ukulifunda ngijule. Ngokwesibonelo, i-meteorology, seismology, ngemvelo.
Ukuhlola izilwane zasendle. Ngokumangalisayo, i-biology uyazi ukuthi kukhona ayibonakali womuntu iso nezilwanyana ezincane. Ukuthi ungakwazi ukubona ukuthi iyiphi amagciwane adala izifo, amagciwane kungaba ukuhlasela abantu, izilwane noma izitshalo.
Yiqiniso, lokhu isayensi naye ehlukene ku izinkomba ezahlukene. Umzimba womuntu (anatomy) ukufunda abafundela ubudokotela ekuzilolongeni kudokotela kwanoma iyiphi okukhethekile.
Ngo ekilasini lesihlanu kuvame khona ngesayensi. Yiziphi isayensi kulesi sici isiyalo? Cishe zonke lezi, kungenzeka lapha ukuze ungeze Umlando. Njengomthetho, abafundi abazimisele ukufunda physics, chemistry nesayensi yokuhlolwa kwezinkanyezi.
Eqinisweni isayensi - ekutadisheni nemvelo, okungukuthi. Ake sithi wonke umuntu uyazi ukuthi izinto awe phansi ngokwabo up, kwesokudla noma kwesobunxele ngeke fly. Umuntu ovamile wayethi ngenye indlela. Kodwa isayensi, i-physics ufuna ukuqonda kwenzeka kanjani.
Abafundi ngizibuze: kungani into ukufunda? Othisha nabazali phikisana, kubalulekile ukuba ohlakaniphile, ukuba khona ezweni lanamuhla, ukuzulazula, ukuthola umsebenzi futhi baziphilise.
Ngesikhathi esifanayo, futhi ungahle uthole umbuzo olukhohlisayo: kungani siyidinga isayensi yemvelo? Ngale nje kwalokho, azi KAHLE, lapho futhi yini. Umuntu akakwazi ukulawula isimo sezulu. Kodwa akufundayo ukulawula imvelo.
Umonakalo kusuka isayensi. Unawo?
Vumelanani ngokuthi, uma ngisho endulo, abantu babengakwazi wahlanganyela esifundweni bemvelo, ukukhomba imithetho ke mhlawumbe manje kungaba nezinxushunxushu. Noma, mhlawumbe, kunalokho, siyobe siphila ezweni nge imvelo lihle. Umuntu namuhla ngakho bacwiliswa intuthuko kwezobuchwepheshe ukuthi akaboni ukuthi izwe ebhidlikayo siyibhekile: ezemvelo, abezombusazwe, odokotela okuzwakalisa inhlabamkhosi. Naphezu kweqiniso lokuthi ukudalwa entsha isayensi isiqondiso zokunqanda izinkinga ezindaweni ezahlukene, isimo kuphela siya siba sibi kakhulu. Mhlawumbe ngisho ekhulwini XIX angizisoli nse intuthuko ke singathanda ziphile ezimweni ezingcono.
Uyini isayensi ukutadisha ezindabeni ezihlukahlukene? Awukwazi ngisho enumerate, njengoba konke etadisha inkinga yabo yonke, ngifuna izimpendulo ezinembile, ukudala into entsha.
Kukhona futhi isayensi, ngemvelo nobuchwepheshe ngalutho, noma, kodwa hhayi ngokwanele - kuba le humanities. Ngokwesibonelo, Psychology, i-social science, umlando, ifilosofi, yezilimi. Impela, bekhulisa inzuzo kubantu uma zifundiswa ngendlela efanele. Kodwa, ngeshwa, bangase ungavumelani natural sciences.
Isihloko waxoxa eziyisisekelo natural sciences, okuyinto ngoba siyafundwa esikoleni. Mhlawumbe othile abafundi bazikhethele umsebenzi wabo wesikhathi esizayo, esekelwe omunye yemvelo kanye womuntu wesayensi, kanye nokusiza abantu ukuba baphile ukuphila okungcono.
Qhuba Ummeli: ukuthi kufanele kube